China OEM ubuso isisekelo makeup liquid wholesale ilebula yangasese vegan isisekelo yezimonyo ifektri kanye nabaphakeli | Ubuhle be-Iris
I-OEM face foundation makeup liquid wholesale label yangasese ye-vegan isisekelo sezimonyo
Isisekelo esilula esinokumbozwa okuphezulu nokuqedwa kwe-matte. Ukumbozwa okugcwele kusebenza nokulawula ukukhanya futhi kukhulise ibala lakho usuku lonke. Kepha akugcini lapho: lesi sisekelo esidala silungele izinhlobo ezijwayelekile zesikhumba, oily, inhlanganisela, kanye nokuzwela.
Isisekelo soketshezi sinokuthungwa okuhle nokuthambile, ukunwebeka okuhle, okulula ukukuxosha, ungagcini, futhi unikeze ukumbozwa okugcwele. Ingakumboza kahle ukukhubazeka kwesikhumba okufana nezibazi zenduna, amabala amnyama ebusweni, imibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo, ithoni yesikhumba engalingani kanye nezimbobo ezikhulisiwe. Kwenza ibala likhanye futhi libukeke, lenze isikhumba sibonakale semvelo ngokuphelele.
Isisekelo soketshezi sinomsebenzi wokuthambisa nokuvala amanzi. Iqukethe ukwenziwa mhlophe nokuthambisa nokulungisa izithako ukuvikela isikhumba, ukumboza imigqa emihle nemibimbi, nokwenza isikhumba sakho sibonakale siphelele ngokwengeziwe.
Ifomula ehlala isikhathi eside, engenamanzi, nejuluka ikuvumela ukuthi ugcine ukwakheka kobuhle obuhlala isikhathi eside usuku lonke. Ukunakekelwa kwesisekelo esilula kungakhuphula ubukhazikhazi, kukhanye ithoni yesikhumba futhi kwenze isikhumba sibe bushelelezi. Idizayini ephathekayo, ama-novices angayisebenzisa kalula, ifanele abesifazane abanamathoni wesikhumba ahlukile.
Igama lento Isisekelo
2. Vegan / Paraben mahhala / uwoyela mahhala
3. Ukuhlala isikhathi eside nokungangeni manzi
4. Smooth, ukumbozwa okugcwele
5. Kuzo zonke izinhlobo zesikhumba
2.Q: Unemibala emingaki yesisekelo?
IMP: Isamba semibala ephelele sinemibala engama-30 ongayikhetha, futhi singenza ngokwezifiso imibala yakho.
3.Q: Ngingasithola kanjani isampula sokuhlola ikhwalithi yakho?
4Q: Uyayamukela i-OEM I-ODM futhi Ungasenzela umklamo?
5.Q: Ngingalindela ukuthola isampula isikhathi esingakanani?
6Q: Kuthiwani ngesikhathi sokuhola sokukhiqiza ngobuningi?
7.Q: Iyini imigomo yakho yokukhokha?
8.Q: Ungasithinta kanjani?
Langaphambilini Ikhwalithi ephezulu yesisekelo se-liquid egcwele ukumbozwa kwesisekelo ilebuli yangasese yokwenza amanzi isisekelo se-makeup
Olandelayo: I-wholesale cosmetic lipsticks liquid matte lipstick ilebuli yangasese yangokwezifiso i-vegan yomkhiqizi wezindebe zemvelo
isisekelo selebuli yangasese yangokwezifiso
isisekelo sokwakheka kwelebula langasese
isisekelo sobuso se-oem